ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းရဲ့ အစောဆုံးလက္ခဏာများ - For her Myanmar
မသိလိုက် မသိဘာသာနဲ့ ကျော်သွားမိလို့ ဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါနော်…
ဟော ကျန်းမာရေးအကြောင်း ပြောကြရမယ့် ရက်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုတော့ ဒေါက်တာစုတို့ ဆေးခန်း လာပြတဲ့ လူနာတွေထဲမှာရော ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေအရရော ယောင်းတို့ သိထားဖို့ လိုတယ်ထင်တဲ့ အကြောင်းရာလေးနဲ့အတူ ရောက်လာပါပြီ။
ယောင်းတို့ ကြားဖူးကြမလားတော့မသိဘူး။ “ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျမယ့် လက္ခဏာမှန်း မသိလို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေမိတာပါ “ ” ကျွန်မက ဒီလို ဗိုက်အောင့်တာကို ကိ်ုယ်ဝန် ပျက်ကျနိုင်တဲ့ အရိပ်အယောင်မှန်း မသိဘူး” စသဖြင့် ဒေါက်တာစုတို့ ဆေးရုံ ဂျူတီမှာ ကြားရလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကြီး ဘယ်သူမှ ယောင်လို့တောင် မက်ချင်မယ်မထင်ပါဘူးနော်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆ်ုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၄ယောက်မှာ ၁ယောက်ဆိုသလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ အတော်အဖြစ်များတဲ့ ကိစ္စလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းရဲ့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း ကိုယ်ဝန် ၃လ မတိုင်ခင်မှာပဲ ဖြစ်လို့ ကိုယ်ဝန် ပထမ ၃လကို ဂရုတစိုက်နေဖို့ ဆရာဝန်တွေက မှာလေ့ရှိတာပေါ့…
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတဲ့ လက္ခဏာတွေကို မကြားဖူးသူတွေဆိုရင် ဖြစ်မှန်းတောင် မသိလိုက်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လို လက္ခဏာမျိုးတွေ တွေ့လာရင် ဆေးခန်း အမြန်ပြေးရမှာလဲ?
သွေးဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း တစ်ခါတည်း ရာသီလာသလို အများကြီးဆင်းပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာမျိုးရှိသလို တချို့လည်း နည်းနည်းကိုပဲ ရက်အတန်ကြာဆင်းလို့ ပေါ့ဆမိတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ နည်းနည်းဆင်းဆင်း၊ များများဆင်းဆင်း မပေါ့ဆဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… သွေးဆင်းတာအပြင် တခြားတွေ့နိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေက…
ငါးအူလိုမျိုး ဖြူဖြူအဖတ်တွေ ဆင်းတာဟာလည်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။
ဆီးစပ်နေရာမှာ ရာသီလာသလို ကိုက်ခဲတာ ဆုပ်ဆွဲထားသလို အောင့်တောင့်တောင့်နဲ့ တင်းနေတာ မျိုးရှိနေရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်တဲ့ လက္ခဏာပါ။
၄။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းပြတဲ့ လက္ခဏာများ လျော့ကျလာခြင်း
ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ အန်မယ်။ ပါးစပ်ပျက်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆက်လက်ကြီးထွားနေတာဖြစ်ပြီး ဒီလက္ခဏာတွေမရှိတော့ရင် ကိုယ်ဝန်မကြီးထွားတော့တာ ပျက်ကျတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားရင် မဖြစ်မနေ လုပ်ထားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြင်ဆင်မှုများ
Blighted Ovum လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဥထဲမှာ သန္ဓေသားဖြစ်ဖို့ ပါမလာလို့ ကြီးထွားမှုမရှိဘဲ ပျက်ကျတာ
ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလွန်း ၊ များလွန်းတာ
လိင်မှ တစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါ ရှိနေတာတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် တစ်ခါ ပျက်ကျဖူးတာနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ပျက်ကျနိုင်ခြေလည်းမရှိပါဘူးနော်…
Related Article >>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲကို ဘယ်လို ကျော်လွှားမလဲ?
သူကသွေးဆင်းတာက ချွဲဆင်းတာလောက်ပဲရှိပြီး တကယ့်ဗိုက်ထဲမှာ ကလေးက နှလုံးခုန်မှန်မှန်နဲ့ ကြီးထွားဆဲပါပဲ။
သူကျတော့ သန္ဓေသား တစ်ရှူး တချို့တစ်ဝက်ပဲ ပျက်ကျသွားပြီး ကျန်တဲ့ တစ်ဝက်က သားအိမ်ထဲမှာ ကျန်ရှိနေတာပါ။ ဒါမျိူးဆိုရင်တော့ သားအိမ်ခြစ် ရတာမျိုး၊ ကျန်ရှိနေတဲ့ အသားစကို ဖယ်ရတာမျိုးလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ သန္ဓေသား တစ်ရှူးအကုန် ပါသွားပြီး သားအိမ်တွင်း ကျန်ရှိမနေတော့တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ သားအိမ်ခြစ်တာမျိုးလည်း မလုပ်ရတတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာမျိုး မကြုံချင်ဘူးဆိုရင် အတန်အသင့်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းတွေကတော့
ကိုယ်ဝန်ဆောင် လိုအပ်တဲ့ အားဆေးကို ပုံမှန်သောက်ပါ။
က်ုယ်ဝန်ကို စောစောနဲ့ ပုံမှန်အပ်ပါ။
ယောင်းတို့အတွက် ဒီတစ်ပတ်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ လို့နှုတ်ဆက်ရင်း
မသိလိုကျ မသိဘာသာနဲ့ ကြျောသှားမိလို့ ဒုက်ခရောကျသှားတာမြိုး မဖွဈစခေငျြပါနျော…
ဟော ကနျြးမာရေးအကွောငျး ပွောကွရမယျ့ ရကျရောကျလာပွနျပွီဆိုတော့ ဒေါကျတာစုတို့ ဆေးခနျး လာပွတဲ့ လူနာတှထေဲမှာရော ကွားနရေတဲ့ သတငျးတှအေရရော ယောငျးတို့ သိထားဖို့ လိုတယျထငျတဲ့ အကွောငျးရာလေးနဲ့အတူ ရောကျလာပါပွီ။
ယောငျးတို့ ကွားဖူးကွမလားတော့မသိဘူး။ “ကိုယျဝနျ ပကျြကမြယျ့ လက်ခဏာမှနျး မသိလို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ နမေိတာပါ “ ” ကြှနျမက ဒီလို ဗိုကျအောငျ့တာကို ကိုယျဝနျ ပကျြကနြိုငျတဲ့ အရိပျအယောငျမှနျး မသိဘူး” စသဖွငျ့ ဒေါကျတာစုတို့ ဆေးရုံ ဂြူတီမှာ ကွားရလရှေိ့ပါတယျ။ တကယျတော့ ကိုယျဝနျပကျြကတြယျဆိုတဲ့ အိပျမကျဆိုးကွီး ဘယျသူမှ ယောငျလို့တောငျ မကျခငျြမယျမထငျပါဘူးနျော။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျဝနျပကျြကတြယျဆျုတဲ့ ဖွဈစဉျဟာ ကိုယျဝနျဆောငျ ၄ယောကျမှာ ၁ယောကျဆိုသလိုဖွဈနိုငျတယျဆိုတော့ အတျောအဖွဈမြားတဲ့ ကိစ်စလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးရဲ့ ၈၅ ရာခိုငျနှုနျးဟာလညျး ကိုယျဝနျ ၃လ မတိုငျခငျမှာပဲ ဖွဈလို့ ကိုယျဝနျ ပထမ ၃လကို ဂရုတစိုကျနဖေို့ ဆရာဝနျတှကေ မှာလရှေိ့တာပေါ့…
ကိုယျဝနျပကျြကတြဲ့ လက်ခဏာတှကေို မကွားဖူးသူတှဆေိုရငျ ဖွဈမှနျးတောငျ မသိလိုကျတာမြိုး ရှိပါတယျ။ ဒါဆို ဘယျလို လက်ခဏာမြိုးတှေ တှလေ့ာရငျ ဆေးခနျး အမွနျပွေးရမှာလဲ?
သှေးဆငျးတယျဆိုရငျတော့ သတိထားမိကွမယျ ထငျပါတယျ။ တခြို့ကလညျး တဈခါတညျး ရာသီလာသလို အမြားကွီးဆငျးပွီး ကိုယျဝနျပကျြကတြာမြိုးရှိသလို တခြို့လညျး နညျးနညျးကိုပဲ ရကျအတနျကွာဆငျးလို့ ပေါ့ဆမိတာလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ နညျးနညျးဆငျးဆငျး၊ မြားမြားဆငျးဆငျး မပေါ့ဆဖို့ သတိပေးခငျြပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… သှေးဆငျးတာအပွငျ တခွားတှနေို့ငျတဲ့ လက်ခဏာတှကေ…
ငါးအူလိုမြိုး ဖွူဖွူအဖတျတှေ ဆငျးတာဟာလညျး ကိုယျဝနျပကျြကတြဲ့ လက်ခဏာတဈခုပါပဲ။
ဆီးစပျနရောမှာ ရာသီလာသလို ကိုကျခဲတာ ဆုပျဆှဲထားသလို အောငျ့တောငျ့တောငျ့နဲ့ တငျးနတော မြိုးရှိနရေငျ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျတဲ့ လက်ခဏာပါ။
၄။ ကိုယျဝနျရှိနကွေောငျးပွတဲ့ လက်ခဏာမြား လြော့ကလြာခွငျး
ကိုယျဝနျရှိလို့ အနျမယျ။ ပါးစပျပကျြနမေယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျဆကျလကျကွီးထှားနတောဖွဈပွီး ဒီလက်ခဏာတှမေရှိတော့ရငျ ကိုယျဝနျမကွီးထှားတော့တာ ပကျြကတြာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျဝနျဆောငျဖို့ ရညျရှယျထားရငျ မဖွဈမနေ လုပျထားသငျ့တဲ့ ကနျြးမာရေး ပွငျဆငျမှုမြား
Blighted Ovum လို့ချေါတဲ့ မြိုးဥထဲမှာ သန်ဓသေားဖွဈဖို့ ပါမလာလို့ ကွီးထှားမှုမရှိဘဲ ပကျြကတြာ
ကိုယျအလေးခြိနျနညျးလှနျး ၊ မြားလှနျးတာ
လိငျမှ တဈဆငျ့ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါ ရှိနတောတှကွေောငျ့ ကိုယျဝနျပကျြကတြတျပါတယျ။
ကိုယျဝနျ တဈခါ ပကျြကဖြူးတာနဲ့ နောကျတဈကွိမျ ပကျြကနြိုငျခွလေညျးမရှိပါဘူးနျော…
Related Article >>> ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ဖွဈတတျတဲ့ စိတျအပွောငျးအလဲကို ဘယျလို ကြျောလှားမလဲ?
သူကသှေးဆငျးတာက ခြှဲဆငျးတာလောကျပဲရှိပွီး တကယျ့ဗိုကျထဲမှာ ကလေးက နှလုံးခုနျမှနျမှနျနဲ့ ကွီးထှားဆဲပါပဲ။
သူကတြော့ သန်ဓသေား တဈရှူး တခြို့တဈဝကျပဲ ပကျြကသြှားပွီး ကနျြတဲ့ တဈဝကျက သားအိမျထဲမှာ ကနျြရှိနတောပါ။ ဒါမြိူးဆိုရငျတော့ သားအိမျခွဈ ရတာမြိုး၊ ကနျြရှိနတေဲ့ အသားစကို ဖယျရတာမြိုးလုပျရနိုငျပါတယျ။
ဒါကတော့ သန်ဓသေား တဈရှူးအကုနျ ပါသှားပွီး သားအိမျတှငျး ကနျြရှိမနတေော့တာကို ဆိုလိုပါတယျ။ သားအိမျခွဈတာမြိုးလညျး မလုပျရတတျပါဘူး။
ကိုယျဝနျပကျြကတြာမြိုး မကွုံခငျြဘူးဆိုရငျ အတနျအသငျ့ကာကှယျနိုငျတဲ့ နညျးတှကေတော့
ကိုယျဝနျဆောငျ လိုအပျတဲ့ အားဆေးကို ပုံမှနျသောကျပါ။
ကျုယျဝနျကို စောစောနဲ့ ပုံမှနျအပျပါ။
ယောငျးတို့အတှကျ ဒီတဈပတျတော့ ဒီလောကျပါပဲ လို့နှုတျဆကျရငျး
Tags: Health, Hurt, Miscarriage, Pregnancy, signs, Symptoms
"ပိပိတို့ စကားဝိုင်း"ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ မနန္ဒာပြောပြတဲ့ "ဘုန်း" နဲ့ Feminism အကြောင်း